सिमानामा भारतीय दादागिरी - Janakhabar
प्रदीप राहादी मगर २०७८ भाद्र २९ गते, मंगलवार
जयसिंह धामी ः भारतीय दादागिरीको सिकार
चार कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको थियो– ‘मालाघात तुइन घटना नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वनिर्णयको अधिकारको विरुद्ध हेपाहा र षड्यन्त्रमूलक घटना भएको हुनाले राष्ट्रिय मुक्ति र जनमुक्तिका पक्षधर आम नेपाली जनतालाई यसको डटेर प्रतिरोध गर्न विशेष आह्वान गर्दछौँे ।’
दार्चुला घटनामा एसएसबी दोषी ः जनअधिकार अभियान
नेपालको सन्दर्भमा भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एक प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा पर्दै आइरहेको छ । यो चुनौतीलाई राष्ट्रिय विषयको रुपमा बोध गरि यसको विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता बन्न गएको छ । नेपालका विभिन्न सिमा नाकाहरूमा भारतीय सिमा सुरक्षा बलले सिमा पिल्लरहरू गायब गरेको छ । कहिले सिमा पिल्लरहरू सारिदिन्छ अनि कहिले नेपालीको घरघरमा हतियार सहित घुसेर तर्साइरहन्छ, भारतीय एसएसबी । यति हुँदा पनि सिमा नाकामा बसेका नेपालीहरू भारतीय एसएसबीसँग लडिरहेका छन् । त्यसैले सिमा नाकामा देखिएका सिमा विवादहरूका समस्या समयमै समाधान हुन जरुरी छ । कहाँ छन्, हाम्रो गायब गरिएका पिल्लरहरू ? कहाँ हो हाम्रो सिमा नाका ? यो भनिदिनुपर्छ नेपाल सरकारले । पटकपटक सिमाको लडाइँमा कहिलेसम्म नेपाली जनताले ज्यान गुमाइरहने ? कहिलेसम्म उनीहरू सिमा अतिक्रमणमा परिरहने ? अनि कहिलेसम्म आँसु चुहाएर सिमामा रोइरहने ? यो नेपालका संसदवादी दलहरूले चाँडै बुझनुपर्छ, ।
-लेखक : जनपत्रकार संगठन नेपाल, रुपन्देहीका संयोजक हुन्।
स्थानीय सरकारहरूलाई खुला पत्र !